तिहरमा सानिमाको छोरी चिके - Nepali Sex Tube
तिहारमा टिकाको दिन, म सानिमाको घरमा थिए। मेरो टिका थिएन। सानिमाको छोरीले (बहिनी)ले उसको भाइलाइ टिका लगाइदिन रेडी हुँदै थिइ। बहिनाी स्नेहा २० वर्षकी छे। लुगाको सौखिन अनि हरेक नयाँ लुगा लगाउँदा फोटो खिच्नै पर्ने। बिहान देखि उसको फरक फरक लुगामा फोटो खिचिसकेको थियो। लुगा चेन्ज गर्दै आउँदै गर्थी।
अन्तिमममा उसले वान पिस लगाएर आइ। सेतो वान पिसमा उसको तिघ्रा र साँप्राको केही हिस्सा देखिन्थ्यो। उसलाइ कुर्सीमा बस्न लगाउएर, खुट्टा खप्ट्याएर पोज दिन सिकाउन थाले। बेलाबेला उसको गुलाबी पेन्टी देखिन्थ्यो। अनि झनै सेक्सी पोज बनाउन सिकाउँथे। उसका पोजहरु सेक्सी छन् भनेर उसलाइ थाहा थिएन।
टिकाको साइत आउन लागेपछि उ नुहाउन बाथरुम छिरी। बाथरुमको कि-होलबाट भित्रको दृश्य देखिन्थ्यो। समस्या के थियो भने, बैठककोठाबाट बाथरुमको ढोका देखिन्थ्यो। बैठककोठामा कोही न कोही भइरहेन्थे। टिका माथिल्लो तलको बरन्डमा लगाउने भएकाले सबैजना माथी थिए।
बहिनी बाथरुम छिर्नासाथ मैले ढोकाबाट भित्र हेर्न थाले। यस्तो मौका पहिले जुरेको थिएन। माथीबाट कोही आउछ कि भन्ने डर, अनि बाथरुम भित्र देखिने सम्भावित दृश्यको कल्पनाले मुटु ढुकढुक भएको थियो। उभिएर हेर्दा खुट्टा पनि काम्न थालेको थियो।
बाथरुम छिरेपछि बाल्टीको तातोपानीमा चिसो पानि मिसाउन धारा खोली। त्यसपछि उसले ट्राउजर फुकाली, पेन्टी फुकालेर भित्ताको लुगा झुन्ड्याउने डन्डीमा राखी। टिसर्ट फुकाली। सेतो समिज फुकाल्दा दुध माथी तन्कियो, रबर झै तल आयो। दुध छचल्कियो दृश्यले मनमा झनै ढुकढुकी बढायो।
बहिनीको पुति वरिपरि रौंको झाडी थियो। काखीको रौं भने काटेकी रहेछी। लुगा लगाउँदा बहिनी जति फुच्ची लाग्थ्यो, नाङ्गो हेर्दा त वयस्क तरुणी लाग्दो रहेछ। सर्लक्क परेको ढाढ, पुट्ट उठेको तल्लो पेट, पोटिला स्तन, अनि उस्तै पोटिला चाकको पुठो, एक-एक गरि हेर्दै गरे। लुगा फुकालेपछि उ ट्वाइलेटको प्यानमा बसी। पिसाब फेरी। प्यानबाट माथी उठ्दा उसको पुतिबाट पिसाब अझै तप तप झरिरहेको थियो।
नाङ्गो शरीरमा पानी खन्याउन थाली। काठमाडौंको जाडो बढिसकेको थियो। साबुन सिधै पुतिमा दली। पुति र चाकमा साबुन दल्दै पानीले पखाली। २-३ मिनेट उ भुँइमा टुक्रुक्क बसेरै पुति सफा गरि। त्यसपछि शरिरमा २-४ पटक पानीले पखाली। अन्त कतै पनि साबुन लगाइन। दुध २-३ चोटी माडी।
पेटी निकाली। उल्टो सुल्टो हेरी अनि लगाइ। अनि समिज लगाइ। भिजेको शरीरमा दुवै लुगा चपक्कै टाँसिए। टिसर्ट लगाइ, अनि ट्राउजर लगाएर उ बाहिर निस्की। म दुगुर्दै सोफामा गएर बसे।
‘टिका लगाउने बेला भएन।’, उ हास्दै मस्किदै आइ। पहिलो पटक बहिनीको सर्वश्व देखे। मन अझै ढुकढुक भइरहेको थियो। बहिनीलाइ हेर्ने नजर नै परिवर्तन भएजस्तो लाग्यो। अब त उसको सबैकुरा देखिसकेको थिए। कल्पना गर्नु पर्ने कुरा बाँकी रहेछ। दुध, पुति र चाक सबैको आकार र रंग देखेपछि त कपडा लगाएर अगाडी आउँदा पनि भर्खरै देखेको उसको अंगहरुको कल्पना गर्न थालेछु।
‘हुँदैछ..’, मैले भने।
बहिनी देख्नासाथ भन्न मन हुन्थ्यो, ‘मैले तिम्रो सबैकुरा देखेे’, भनेर। तर उसले के सोच्ली भन्ने डरले भन्न सक्थिन।
यदि मैले बहिनीको गुप्याङ्ग देखे भने उसले पनि त मेरो देख्नुपर्यो नि। मलाइ मेरो लाडो उसलाइ देखाउन मन लाग्न थाल्यो। बहिनीले मेरो लाडो देखोस् भन्ने चाहान बढ्न थाल्यो।
उ मेरो कोठामा आइरहन्थी। मैले योजना बनाउन थाले। एक दिन बिहान उ मेरो कोठातिर आइरहेको देखे। मैले हतपत ट्राउजर खोले, टिसर्ट खोले, अनि अन्डरवेयर खोले। लाडो पनि झटपट ठन्किसकेको थियो। उ ढोकाबाट छिरी। टाउको अर्को साइडमा घुमाएर मैले अन्डरवेयर खोज्न लागेको जस्तो नाटक गर्दै थिए। केही सेकेन्ड त उसले हेरी, अनि मैले टाउको घुमारएर उसलाइ हेरे। तर्सेको जस्तो गरे, अनि हातले ठन्किएको लाडो छोपेजस्तो गरे।
‘ढोका लगाएर फेर्नु पर्छ नि…।’, लाज मान्दै उ तत्कालै बाहिर निस्की।
मैले छिटो छिटो लुगा लगाएर पछि पछि गए।
‘के देख्यौ, सबै बिर्सीहाल त।’, आफु चोखो बन्ने नाटक गर्न थाले। उ हाँसेको हाँस्यै गरिरही।
‘छैन केही नि देखेको छैन…’, उसले भनी। अनि आफ्नो कोठा तिर दगुरी।
भोलीपल्ट उ घाम ताप्दै छत तिर जाने भर्याङ्मा बसिरहेकी थिइ। मोबाइल चलाउँदै थिइ।
‘कति चलाउँछौ मोबाइल? के गर्दै हो?’
‘इन्स्टाग्राम चलाको’, उसले मुस्कान दिदै भनी।
‘कसलाइ म्यासेज गर्या?’, मैले सोधे।
‘पोस्टहरु स्क्रोल गर्या, स्क्रोल गर्यो बस्यो…’, उसले भनी।
‘म्यासेज पो गर्नुपर्छ..व्वाइफ्रेन्ड बनाएकी छैनौ?’,
‘छैन,.. केही छैन..भुक्का टाँट हो..’, मुस्काउँदै भनी।
‘मन नै छैन।’, उसले भनी।
‘ठिकै हो, मनै छैन भने त किन बनाउनु त, है?’
बेलुका हामी पानी पुरी खान बानेश्वर चोक पुग्यौ। बाटोमा हिड्दा केटाहरु उसको छाती तिर घोरिएर हेर्थे।
‘हामी यसरी हिड्दा हामीलाइ अरुले के सोच्छन् होला ?’, मैले सोधे।
‘खै…व्वाइफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भन्छन् होला कोही त..’, उसले भनी।
‘हामी त्यस्तो देखिन्छौ र?’, मैले सोधे।
‘मलाइ के थाहा..’, उसले लाज मान्दै भनी।
बेलुकाको खाना खाइसकेपछि म कोठामा छिरे। उसको फोन मेरो कोठामा चार्जमा राखेको थियो। किचनको धन्दा सकेपछि उ कोठमा फोन लिन आइ। म पुरै नाङ्गै ठन्किएको लाडो देखिने गरी लुगा फेर्न लागकेो जस्तो गरेर बसेको थिए।
‘अबुइ….’, मैले झस्केजसरी लाडो छोप्न खोजे। उसले छिटो छिटो मोबाइल चार्जबाट थुतेर भागीहाली।
दोस्रो पटक मैले उसलाइ मेरो कालो लाडो देखाएपछि मेरो मन शान्त हुने कुरै भएन।
एकपछि अर्को उत्तेजक कल्पना चल्न थाल्यो।
हामी भोलिपल्ट पनि पानी पुरी खान बानेश्वर चोक पुग्यौ।
‘हिजो तिमीले देखेको कुरा बिर्स है… ‘, मैले कुरा निकाले।
‘कसरी बिसर्ने,..’, उसले हाँस्दै भनी।
‘के देख्यौ हिजो भन त…’, मैले सोधे।
‘तपाइ कस्तो मान्छे के..’। उसले भनी।
‘पहिले पनि देखेको थियौ केटा मान्छेको?’, मैले सोधे।
‘कस्तो लाग्यो नि?’
‘कालो..’, उसले भनी। कुरा गर्न अप्ठ्यारो मानी
बेलुका भान्साको काम सकेपछि उ फेरी मेरो कोठामा छिरी। अब त छिर्दिन होला सोच्दै थिए। उ छिरेको थाहा पाउना साथ, ट्राउजर तल सारेर लाडो निकालेर चलाउन थाले। उसलाइ देखे नदेखे झै गर्दै बसे।
‘दादा..के गर्या?’, उसले बिस्तारै भनी।
‘ओइ… ‘, मैले तर्सेझै गरे। अनि भने, ‘केेही होइन.. तिमीले त मेरो देख्न नहुने कुरा सबै देख्यौ, मलाइ पनि देखाउन न तिम्रो..’
‘अँ…अब त्यहि बाँकी छ नि।’, उसले भनी।
‘अनि.. मेरो चाही हेर्ने रे, देखाउ न, हेर्छु नि, मैले अहिलेसम्म देखेको छैन, कस्तो हेर्न मन छ।’, मैले भने।
‘देखाउँदिन.. गए म…’, उ जान खोजी।
‘स्नेहा…देखाउन न प्लिज… एकैछिन मात्र.. अनि गइहाल।’, मैले खाटबाट उठेर भने।
‘भो..अरुले देखेभने के भन्लान्…’
‘५ सेकेन्डको कुरा हो… माथीको बुबु मात्र देखाउन त..छिट्टो ल त…!’
उ मोबाइल चलाउँदै एकछिन अडिइ। अनि पुलक्क मलाइ हेरी।
‘कसैलाइ नभन्नु है त।’, भनेर उसले टिसर्ट र समिज एकसाथ माथी उचालेर दुध देखाइ। २ सेकेन्ड पनि नहुँदै उ कोठाबाट गायब भइ।
भोलीपल्ट भान्सामा स्नेहा मात्र आलु काट्दै थिइ।
‘ओइ.. मैले हिजो राम्रो संग देखिन.. अहिले उज्यालोमा पनि देखाउन।’, मैले कानमा खुसुक्क भने।
‘ममी आउनु हुन्छ के अहिले..’, उसले लजाउँदै भनी।
‘म बाहिरबाट छोएर चेक गरम।’
‘अँ…’, उ अन्कनाइ… ढोकाबाट बाहिर हेरी। बाहिर कोही थिएन।
‘ल छिट्टो..’ उसले परमिसन दिइ।
उसको टिसर्ट बाहिर बाट बिस्तारै दुध समाते। पुट्ट उठेका दुध, समात्दा त कस्तो काइदा। अनि अर्को दुधपनि निचोरे।
‘ममी..ममी..’, उ आत्तिइ।
सानिमा किचन भित्र छिरिसक्दा म कुर्सीमा गएर बसिसकेको थिए। स्नेहा आलु काट्ने काममा फर्किसकेकी थिइ। बाल-बाल बचियो।
सानिमा पानी पिएर तलै फर्किनु भयो।
कुर्सीबाट जम्प हानेर स्नेहाको नजिक पुगे।
‘तिमी तरकारी पकाउँदै गर, म बाहिर पनि हेर्दै टच गर्छु है…’,
‘हेर्नु है बाहिर, कसैले नदेखोस् नि…’, उ दिन राजी भइ।
स्नेहाको पछाडी बसे। दुवै हात छिराएर दुध मुसार्न थाले।
‘कस्तो काउकुती लाग्यो, बिस्तारै गर्नु न…’, उसले शरीर निहुराउँदै, बटार्दै भनी।
उसको टिसर्टको तलबाट हात घुसारे।
‘कति चिसो हात!’
‘पर्ख न, तातिहाल्छ भित्र हालेपछि…’
उसको दुधको मुन्टा खेलाउन थाले। अनि दुध मोल्न थाले। उसको स्वास बढिसकेको थियो। तरकारी पनि नाम मात्रको चलाइरहेकी थिइ। लोसे पाराले।
दिउँसो धन्दा सकिन लाग्दा किचनमा पुगे।
‘नानु, तलको पनि देखा न…’
‘भो, कोही आयो भने लुगा लगाउनै भ्याउँदैन।’
‘म बाहिरबाटै चलाम त..’
‘छिट्टो है त…’
मैले उसको ट्राउजर बाहिरबाट मुसारे। बहिनीको कलिलो पुति समाते, अनि रगड्न थाले।
उसले त ढाड मेरो छातीमा ढल्काइ। केही बेरमा आनन्द सानो आवाज निकाल्न थाली। …अम…अँ….उ….उ….
ट्राउजर, अनि पेन्टी भित्र हात हाले। बाक्लो रौं छिचोल्दै पुतिसम्म हात पुर्याए। भिजिसकेको थियो। चिप्लो पानी हात भरी लाग्यो। पुति मुसार्न थाले। बहिनी पुरै मेरो ढाडमा ढलिसकेकी थिइ। तलबाट सानोबा बोल्दै माथी उक्लेको आवाज आयो। म किचनबाट बाहिर निस्के। हात भरी बहिनीको चिप्लो पानी थियो, चाट्न मन लाग्यो।
बेलुका खाना खाएपछि स्नेहा छतमा डुलिरहेकी थिइ, मोबाइल चलाउँदै। म माथी उक्ले।
छतको कुनामा डाके। अनि बिहानको अपुरो काम गर्न थाले।
छतमा यति बेला कोही आउने डर थिएन। सानोबा बेलुका टुच्च लगाएर सुतिसक्नुभएको थियो। सानिमा सुतेपछि एकैपटक बिहान उठ्ने हो।
मैले बहिनीलाइ छतको चिसो भुँइमा सुताए, ट्राउजर खोले, पेन्टीखोले, अनि पुति चुस्न थाले।
रातको ११ बजेसम्म मैले उसलाइ पुरै नाङ्गो बनाइसकेको थिए।
दाँयाबाँया होचा घरहरु थिए, तल बाटोमा बेला बेला बाइक कराएको सुनिन्थ्यो। अरु पुरै शान्त भइसकेको थियो।
मैले बहिनीको उत्तानो शरीरमाथी घोप्टिएर पुतिमा लाडो छिराए। बहिनीले दुख्यो भनी।
एउटा हातले बहिनीको मुख छोपेर पुतिमा पेल्न थाले।
‘एकैछिन खप है, अनि दुख्न छोड्छ।’, भन्दै मुख थुनिरहे। ऐया ऐया भनेको रातीको शान्तमा अरुले सुन्न सक्थे।
झन्डै पाँच मिनेट बहिनीको पुतिमा ठेलिसकेपछि उसले ऐया भन्न छोडी। सेतो फुसी बहिनीको दुधमा झारे। उसले समिजले पुछेर लुगा लगाइ। रातीको १ बजेसम्म हामी किस गर्दै अंगालोमा न्यानो भएर बसिरहेका थियौ।